Ikhaya likaBravo 'leNdlu yeHlobo' kwiiHamptons Likho kwiNtengiso ye $ 3.9 yezigidi - Izindlu Ezithengiswayo
Ikhaya likaBravo 'leNdlu yeHlobo' kwiiHamptons Likho kwiNtengiso ye $ 3.9 yezigidi
Ukuba ubukele iBravo's Indlu yehlobo , emva koko sele unolwazi oluninzi ngamagumbi asibhozo okulala i-luxe Hamptons estate ebikukubeka indawo ezininzi zokuzonwabisa, ezizaliswe ngotywala kwezi sizini zintathu zidlulileyo. Ngoku ngokusesikweni kwimarike, le nyani ibonisa indawo ephawulekayo yeyakho ukuba ube yeyakho epholile eyi- $ 3.9 yezigidi.
eyoyikisayo iipateni zeelanteni
Ngaphandle kokuthobela i-shenanigans ezininzi zikaKyle Cook, uLindsay Hubbard, uHannah Berner, kunye nabanye abasebenzi, eli lifa liyinto entle. Indlu engamamitha ayi-6,500 yeenyawo ihleli kumhlaba oziihektare ezintlanu, uqinisekisa ubumfihlo obupheleleyo. Ipropathi inendawo yokufudumeza umhlaba, ibhafu eshushu, kunye nenkundla yemozulu yentenetya yonke. Ngaphakathi uyakufumana ibha emanzi enendawo yayo yokutyela, igumbi lokutyela elisesikweni, igumbi elingaphantsi ngokupheleleyo nelineziko lokuzonwabisa kunye nekhitshi, kunye neendawo ezininzi zokuzonwabisa zokudibana kwezentlalo (okanye ukusondelelana). Uluhlu Egcinwe nguGeoff Gifkins we-Nest Seekers International, ukwaphawula ukuba kukho indawo eyahlukeneyo 'yomkhwenyana' kunye 'neendawo zokuhlala zabucala.' Ufuna ukubona ngaphezulu? Jonga le Hamptons stunner apha ngezantsi.
Kwaye ungakhathazeki-kufunyenwe ukucocwa ngokucokisekileyo ukusukela oko Indlu yehlobo abasebenzi baphuma. Ukukhanya okumnandi okuhle, akunjalo?
Lo mxholo ungeniswe kwi-Instagram. Unokwazi ukufumana umxholo ofanayo kwenye ifomathi, okanye unokufumana ulwazi oluthe kratya, kwiwebhusayithi yabo. Jonga kwi-Instagram
iitafile ezimbini zasekhitshini zokuhlala
UKelly Corbett Umbhali weendaba UKelly ngumbhali weendaba kwiNdlu entle apho agubungela into encinci kuyo yonke into ukusuka kwindlela yokuhombisa kwaye kufuneka abe nemveliso, kuyo nayiphi na into ebandakanya iidonuts okanye i-glitter.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
amakhonkco okubandakanya idayimani eluhlaza
ungalima imifuno ngaphakathi
izisombululo zokugcina ikhabinethi ekhitshini